TQC- Bookprintingchina yakakwirira mhando kutonga system.-Blog-Bhuku Kudhinda China
TQC- Bookprintingchina yakakwirira mhando kutonga system.
nguva: 2017-07-12 Hits: 173
TQC: Ndeipi pfungwa? Yakazara yemhando kutonga, yakanzi TQC.
TQC yeBhukuPrintingChina: Zvinoda munhu wese kuve nemhosva yemhando yezvigadzirwa, tsvaga zvinetso zvemhando munguva, uye gadzirisa matambudziko ari pakutanga. Kusiyana nemamwe mabhizinesi, isu tiri mugadziri anoita basa rekudhinda nekusunga kwemabhuku uye makopi. Zvinoenderana nekufunga kwekuita, pamwe hapana fekitori yekudhinda mupfungwa dzako inozopomhodza hunhu hwakadai hwekudzidzira kuiswa mukudzidzira. Bhuku rekuprinta riri kunyatso kuita izvi pasina kuedza.
Saizvozvo, yakakwirira yepamusoro management management pfungwa inouya kubva kumabhizimusi eJapan, vashandi kunyange vane kodzero yekumisa tambo yekugadzira kana vawana matambudziko emhando. Nekuti imwe yemafungiro ehuwandu hwemhando yekutarisira ndeyekuti kunaka mamiriro ekugara kwakakosha kudarika kuburitsa kwakanyanya.
Kugadziriswa kwe kudhindwa kwebhuku uye kusunga mhando kwakakosha kudarika kuburitsa kwakawanda mufekitori yedu. saka, muTQC, kusimbiswa kwakanyanya kunoiswa pane yevashandi vese kutarisa, ndiko, mushandi wega wega anovimbisa kuti hapana zvikamu zvine urema zvinopinda muitiro unotevera.
Semuyenzaniso, yedu kuomesa bhuku uye mabhuku kudhinda maitiro; fungidzira kuti munhu wese mushandi mukudhinda anogona kuvimbisa 100% iyo chete mabheti akakodzera anopinda inotevera kupeta maitiro, ndiko kutaura, uyo wokupeta muitiro anogona kuwana 100% yezvikamu zvisina kukodzera mushure mekupedza kugadziriswa. (Pano, fungidzira kuti pane rimwe risingakodzeri pepa.) Kufanirwa kupeta uye kudyisa yakasara yakakodzera kupeta (kufungidzira 114-1 = 113) muchimiro chekuvhara-shinda; saizvozvo, chete 108 zvidimbu zvemvere dzakakodzera dzinobvumirwa kupinda mukati meiyo yakaoma / glue zvipikiri mushure mekugadzirisa-tambo yekuvhara kwapera, uye mashanu mabhuku asina mhando emakushe anotorwa; nomuenzaniso, iyo yekupedzisira kugadzirwa kwevashandi vanovhara hardland mune inoitwa. Zvigadzirwa zvinodiwa 100 zvidimbu.
Bookprintingchina Inoshanda mukugadziriswa kweTQC quality management pasi peiyo hardback bhuku kudhinda chiyero chekunakirwa kwemhando yepamusoro chakanyanya kugadzikana uye chakanakira. Bookprintingchina inoramba ichigadzirisa iwo emhando yekudzora nodhi mukudhinda uye kusungira maitiro eko kudhindisa. Dzidza nezvedu, www.kuparvch.com
Prev Page : BPC(Rechishunchina.com)-22 makore ehunyanzvi hwekudhinda bhuku
Next Page : hapana
Copyright © 2019 BookPrintingChina.com All rights rights rights made.